हेर्नुहोस् ! १९ बर्षिया यि युवतीको अचम्मको प्रतिभा, सबैलाई चकित पार्दै , सबैले एक पटक हेरेर सेयर गरिदिनुहाेला ( भिडियो साहित ).. ‘ – Khabar Chautari
हेर्नुहोस् ! १९ बर्षिया यि युवतीको अचम्मको प्रतिभा, सबैलाई चकित पार्दै , सबैले एक पटक हेरेर सेयर गरिदिनुहाेला ( भिडियो साहित ).. ‘
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ०६, २०७७ समय: १८:३०:१९
१९ बर्षिया यि युवतीको अचम्मको प्रतिभा, सबैलाई चकित पार्दै वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने तयारि, सबैले एक पटक हेरेर सेयर गरिदिनुहाेला । अहिले नारी नारी मात्रमा सिमित छैनन पुरुषलाई पनि चुनौति दिदै हरेक क्षेत्रमा आफूलाई अगाडि बढाईरहेका छन । समान्यतया हामी र हाम्रो समाजमा नारी भन्दा बितिकै घर ब्यवहार सम्हाल्ने र घरायसी काम गर्ने भनेर सोचाई आउथ्यो,
पहिला पहिला तर अहिले जमाना आधुनिकता तर्फ ढल्किरहेको छ र सबैको सोचमा ब्यापक परिबर्तन पनि आईरहेको छ ।। हो आज हामी त्यस्तै बहादुर र प्रभाबशाली नारीको बारेमा कुरा गर्दैछौ । यि युवतीको नाम हो अप्सरा खनाल जो अहिले १९ बर्षकी भएकी छिन र यि युवती अर्कैको घरमा बस्छिन तर यिनीस“गको यो अचम्मको कला अहिले संसारभार भाईरल बन्न पुगेको छ ।।
कसैले पनि सोच्न नसकेको यिनले स्कुटर चलाउदा एउटा खुट्टा आफनै काधमा बोकेर यसरी चलाउन सक्छिन भन्दा जो कोही अक्क न बक्क हुन्छ । त्यतिमात्र कहा हो र, यिनले त आफनो टाउको पनि जसो भनो त्सै तरिकाले मोडेर पछाडि फर्काउदा एकदमै डर नि लाग्छ । एउटा खुट्टा टाउकोको आडमा काधमा राखेर यसरी दौडिन्छिन कि मानौ म्याराथुनमा दौडिए जस्तै । हेर्नुहाेस् यी युवतीकाे अदभूत क्षमता हेरेर सपोर्टका एक सेयर गरिदिनुहाेला:-
याे पनि, १० महिना पछि टीका सानुकाे स्टेज धमाका, फ्यानहरुकाे भिड थाम्नै हम्मे हम्मे, लोक गायिका टिका सानुले झण्डै १० महिनापछि स्टेज कार्यक्रम गरेकी छन् । लकडाउनपछिको उनको यो पहिलो स्टेज कार्यक्रम हो । उनले आफ्नो पहिलो स्टेज कार्यक्रमकोलागी नुवाकोटलाई रोजीन् ।
गायिका टिका सानुले नुवाकोट जाँदा बाटोभरी नै आफैले भिडियो बनाएकी थिईन् । उनी उक्त कार्यक्रमकोलागी निकै नै उत्साहीत देखिन्थिन् । उनले कठमण्डौदेखि नुवाकोटसम्मको बाटो यात्रा र कार्यक्रमकोलागी तयारी हुँदै गरेको सबै दृश्यलाई समेटेकी छन् । गायिका टिका आउने भनेर होला या लकडाउनपछिकै पहिलो स्टेज कार्यक्रम भएर होला टिका सानुको कार्यक्रममा दर्शकको निकै नै घुईँचो थियो ।
जुन टिका सानुले पनि सोंचेकी भेन थिईनन् होला । तर जब उनले त्यो भिड देखिन् तब उनी गीत गाउनकोलागी झनै उत्साहीत पनि देखिईन् । टिका सानुले गीत गाएर धेरै दर्शकलाई स्टेजमै नचाईन् पनि । टिकाको यो प्रस्तुती देखेर उनका फ्यानहरुले सोशल मिडियामा उनलाई धेरैले सकारात्मक प्रतिकृया दिएका छन् ।